Madaxweyne Deni: “Waxaan u dhaartay waa ilaalinta sharciga, midaasna cid aan kala gorgortamayo ma jirto” – Radio Daljir
Madaxweyne Deni: “Waxaan u dhaartay waa ilaalinta sharciga, midaasna cid aan kala gorgortamayo ma jirto”
Nofeembar 28, 2021 1:03 g 0
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inay muhiim tahay in cidkasta ay sharciga ilaaliao sigaar ah Ciidamada kala duwan ee Puntland oo dbismahooda waqti badan iga baxay.
Waxaa uu sheegay hadii Ciidamada ay ku xad gudbaan ama jebiyaan sharciga Ciidamada ay ka ciqaab weyn yihihiin dadka Shacabka ah.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dowladnimadu ay tahay ciidan hadii la waayana ay dhaceyso fowdo ayna meesha ka baxeyso dowladnimada, isla markaana muhiim ay tahay in dal walba uu yeesho Ciidamo sharciga ilaaliya.
”Waxa Puntland ay Ciidamada u dhiseyso oo dhaqaalaha u gelineyso waa in sharciga uu sareeyo, waxaan u dhaartay waa ilaalinta sharciga, midaasna cid aan kala gorgortamayo ma jirto ayuu yiri Madaxweyne.
Wuxuu sicad u sheegay Madaxweyne Deni in ay ku guuleysan doonaan inay helaan dad sharciga u hogaansan oo aan si baryaha ugu hogaansamin dowladnimada.
Hadalkaan kasoo yeeray Madaxweynaha Puntland Puntland ayaa kusoo aadaya xilli Agaasimihii Ciidanka PSF ee uu xilka ka qaaday uu diiday, isla markaana xiisad ka dhalatay ay ka taagan tahay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Hadalkan ayuu kasheegay xili uu maanta xariga uu ka jaray hoyga ciidamada Asluubta Puntland.
RIYADII RUMOOWDAY IYO MAALMO KALE OO CUSUB & DEKEDDA GARACAD OO FURAN (daawo)
DUQA BOOSAASO: “PSF Hajoojiso barakicinta iyo baqdin gelinta shacabka” (daawo)